Kooxda Shirkadda - Guilin HongCheng Mining Equipment Manufacture Co., Ltd.
Guilin Hongcheng Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd. waxay u hoggaansamaan cilmi-baarista sayniska iyo istaraatiijiyadda horumarinta diiradda saaraya horumarinta tartanka badeecada, waxay qaadataa isku-dhafka "cilmi-baarista sayniska, hal-abuurka tignoolajiyada iyo horumarinta tignoolajiyada" sida khadka ugu weyn, waxay ku tiirsan tahay koox cilmi baaris cilmiyeed oo xooggan. , horumariya oo cusboonaysiiya, ujeedadeedu tahay soohdinta farsamada ee warshadaha Raymond Mill Market, oo ay si joogto ah u wanaajisaa guud ahaan awoodda hal-abuurnimada sayniska iyo tignoolajiyada ee shirkadda.
Guilin Hongcheng waxa uu leeyahay tiro ka mid ah shatiyada alaabta, iyo tamarta-badbaadinta iyo qalabka pulverizer deegaanka-saaxiibtinimo ayaa ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee Shiinaha.Sanado badan oo dhismo iyo horumarin ah ka dib, xarunta R & D waxay noqotay qaybta naqshadaynta fasalka A ee warshadaha mashiinada macdanta, oo leh xaalad sharci oo madaxbanaan iyo qaybta agaasimaha naqshadaynta injineernimada Guangxi iyo ururka macdanta.
Ku tiirsanaanta qalabka macdanta ee R & D xarunta, Guilin Hongcheng ayaa si joogto ah u kordhisay maalgashiga sayniska iyo teknoolajiyada R & D iyo tababar xirfadeed.Waxay si isdaba-joog ah u aasaastay iskaashi farsamo iyo xidhiidh isdhaafsi tacliimeed oo ay la yeelato kulliyadaha gudaha iyo jaamacadaha iyo machadyada cilmi-baarista sayniska, iyadoo la socota safka hore ee waqtiyada iyo si joogto ah u duraya firfircooni cusub.
Guilin Hongcheng waa shirkad saynis iyo tignoolajiyadeed oo ku takhasustay R&D iyo soosaarka qalabka miinada.Guilin Hongcheng waxa uu aasaasay machad cilmi-baadhiseed oo la kaashanaya machadka cilmi-baadhista sayniska, kaas oo ay ka go'an tahay mawduuca ugu weyn ee qalabaynta dhamaystiran iyo qalabka miinada oo ballaaran.
Shirkadda Guilin Hongcheng kaliya maaha inay fiiro gaar ah siiso cilmi baarista sayniska iyo tignoolajiyada iyo horumarinta, laakiin sidoo kale waxaa ka go'an inay soo bandhigto tignoolajiyada wax soo saarka mashiinada horumarsan ee warshadaha.Sannadkii 2008, waxaanu iskaashi la samaynay shirkado badan oo Jarmal ah si ay u soo bandhigaan tignoolajiyada wax-soo-saarka mashiinka wax-shiidka ee horumarsan ee Shiinaha oo ay noqdaan calaamad aad u fiican oo ah qalabka macdanta gudaha.
Warshadda Rinjiga Rinjiga Burada Ka Soo Qaada Shiineeska Dhaqdhaqaaqa Fiican ee Ultra Ultra Fine Mill Batroolka Coke Roller Mill Qiimaha Mashiinnada Milling Furimaha Dagaalka